Golaha The kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inay Ciise ka hor hawada | Apg29
Kitaabku waxa uu leeyahay waa in aynu la soo qabtay oo daruuraha ku. Ogow in ay kor u taagan. Our jihada waa sidaas oo kor u.
badbaadadayda oo dhan waa kiniisadda Ilaah dhulka ku kor loola qaadi doonaa si ay Ciise ka hor tagaan in hawada.
Waxaan Sidaa darteed waa in lagu daro mid ka mid ah inay Yeruusaalem aadaan, laakiin waxaan doonaa in la kor loogu qaaday in daruuraha dhexdooda inaynu Rabbiga hawada kula kulanno ah. Waa in Ciise in aan kor u jiiday in si ah in aan had iyo jeer noqon doonaan isaga la.
1 Th 4:17. Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha waa la qaban doona ilaa wada iyaga oo leh in daruuraha Rabbiga u kulmaan hawada . Oo sidaas daraaddeed waxaan doona Rabbiga weligeen ula noqon .
Kitaabku waxa uu leeyahay waa in aynu la soo qabtay oo daruuraha ku. Ogow in ay u taagan kor u . Our jihada waa sidaas oo kor u. Marka lagu jiido aan kor , waxaan la kulmi doonaa Rabbi Ciise hawada. KJV ayaa tarjumay bannaanayd.
Laakiin Ciise, toddoba sano ka dib, ka dib markii rayrayn ahayd si ay dhulka ku soo noqon doonaan ayuu keenaa shirka. Oo isna wuxuu kaniisadda (oo dhan oo naga mid ah yihiin kuwa badbaadayaa, kuwaas oo kor loogu qaaday isagii ku) ku noqdeen Yeruusaalem.
Jud 1:14. Haddii sidoo kale Enoch, farcankii toddobaad oo Aadan, wuxuu sii sheegay, oo wuxuu ku yidhi, Bal eega, Rabbigu wuxuu yimid isagoo leh shirkad aan la tirin karin quduusiintiisa.
In parentheses, waxaan ka dhigi kara in aad ogaataa in ay jiraan "shirkada aan la tirin karin." Waxaan sidaas u noqon doonaa badan oo badan oo la badbaadiyey la Ciise soo laaban doonaa!
Daruuro iyo wax hawada kala duwan
Ogow in "daruuraha" iyo "hawada" ma aha wax la mid ah. Haddii ay ahayd wax la mid ah, waxaa ay noqon lahaayeen labo eray oo kala duwan waxaa loogu talagalay. Daruuruhuna (daruuraha) kicin inuu na cadaadis, laakiin waa in hawada in aan la kulmo Rabbiga. Ama sida loo tarjumay in KJV "meel" ah.
tani waxay run Kitaabka Qudduuska ah, waan fahmay in qalbigayga waqti dheer laakiin aanan hore u arag sida ugu muuqaal fiican Waxaan dhawaan ku arkay markii aan akhriyey aayaddan.
Waxaan sameyn trepunktslista ah si ay u sii cad dahay.
Waxaan kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda
Rabbiga Waxaan la kulmi doonaa hawada.
Oo sidaas daraaddeed mar walba waannu Rabbiga la jiri doonaan.
Iyo dhibic afaraad waxaan ku dari kartaa:
Ciise goortuu yimaado Yeruusaalem dib, hore ayuu nala lagu kor!